TAR Fitaovana fanamboarana. TAR Rindrambaiko fanarenana. TAR Amboary ny fitaovana.
DataNumen TAR Repair dia ny tsara indrindra TAR fitaovana fanamboarana sy fanarenana eto amin'izao tontolo izao. Afaka manamboatra ny simba na simba TAR arisiva ary avereno arak'izay azo atao ny angon-drakitrao, amin'izay hampihena ny fatiantoka amin'ny kolikoly fisie.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,642)
Nahoana DataNumen TAR Repair?
Nividy ny rindrambaiko nataoko omaly aho hamerenana 7GB tar fisie izay ny lahatahiry "Documents and Settings" nataoko manontolo avy amin'ny solosaina finday izay hiditra
Mpamolavola elektronika, tantsaha, elektrisianina, mpitendry zavamaneno
Endri-javatra lehibe ao DataNumen TAR Repair v3.0
Fanohanana hanamboarana Unix mahazatra Tar raki-daza.
Fanohanana mba ho sitrana Tar fisie amin'ny media maloto, toy ny floppy disk, Zip kapila, CDROM, sns.
Fanohanana hanamboarana andiany iray Tar raki-daza.
Fanohanana hanamboarana Tar rakitra toy ny 2TB (2048GB).
Tohano hahitana sy hisafidy ny Tar rakitra tokony hamboarina amin'ny solo-sain'ny mpanjifa.
Tohano ny fidirana amin'ny Windows Explorer, hahafahanao manamboatra Tar manaova rakitra miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer.
mampiasa DataNumen TAR Repair hamerina simba TAR Tahiry
Raha ny anao TAR simba na simba ny arisiva ary tsy afaka manokatra azy ireo ara-dalàna ianao, azonao ampiasaina DataNumen TAR Repair hijerena ny TAR tahirizo ary avereno ny angona avy aminy araka izay azo atao.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenana izay simba na simba TAR archive with DataNumen TAR Repair, azafady manakatona ireo rindranasa hafa mety hiditra amin'ny TAR tahiry.
Safidio ny simba na simba TAR arisiva hamboarina:
Azonao atao ny mampiditra ny TAR anarana archive mivantana na kitiho ny bokotra hijerena sy hisafidianana ny rakitra arisiva. Azonao atao koa ny manindry ny bokotra hahitana ny TAR rakitra tahiry hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Default (nitranga in- DataNumen TAR Repair hamonjy ny raikitra TAR rakitra tahiry ho xxxx_fixed.tar, izay xxxx no anaran'ilay loharano TAR tahiry. Ohatra, ho an'ny loharano TAR archive Simba.tar, ny archive fixe default dia ho Damaged_fixed.tar. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny anaran'ny fisie archive na tsindrio ny bokotra hijerena sy hisafidianana ny rakitra arisiva raikitra.
Tsindrio ny bokotra, ary DataNumen TAR Repair start scanning sy fanamboarana ny loharano TAR tahiry. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotry ny fanamboarana, raha ny loharano TAR archive azo amboarina soa aman-tsara, dia hahita boaty hafatra toy izao:
Azonao atao izao ny manokatra ny raikitra TAR arisiva miaraka amin'ireo fampiharana mifandraika amin'izany.
DataNumen TAR Repair 2.4 dia navoaka tamin'ny 21 Desambra 2020
DataNumen TAR Repair Navoaka tamin'ny 2.2 Novambra 5 ny 2020
DataNumen TAR Repair 2.1 dia navoaka tamin'ny 8 martsa 2020
Fanohanana mba ho sitrana tar fisie noforonin'i 7-Zip.
DataNumen TAR Repair 2.0 dia navoaka tamin'ny 16 Novambra 2013
DataNumen TAR Repair 1.2 dia navoaka tamin'ny 5 Jona 2005
Hatsarao ny fahamendrehana sy ny hafainganan'ny famerenanana.